Tombony 7 amin'ny Digital Display - signage Easy Multi Display Digital
No comments sur 7 tombony amin'ny Digital DisplayPosted in Digital Signage Par Clemnamoaka Enga anie 20, 2021 Jona 18, 2021
1. Voafehinao ny dokam-barotrao
2. Mora mifanaraka amin'ny orinasanao
3. Safidy rindrambaiko bebe kokoa
4. Fanavaozana ny atiny haingana
5. Asongadino ny asan'ny hafa
6. Fampisehoana mavitrika
7. Manampy ny olona
Mbola misalasala ve ianao amin'ny fampiasana Digital Display hampisehoana ny orinasanao sa te hahita fomba hafa hampiasana azy ianao? Avy eo ho anao ity lahatsoratra ity! Manolotra anao tombony 7 amin'ny Digital Display izahay ka maninona raha avela hofitahin'ity teknolojia vaovao ity izay azo idirana kokoa?
Hainay ao amin'ny Easy Multi Display fa ny dokam-barotra dia mety ho lafo be eo anelanelan'ny fanontana ny karatrao, ny fanontana flyer hanasongadinana ny orinasanao na ny SEA (Search Engine Advertising) ... Ary farany, ny vidin'ny dokam-barotra dia mety ho lafo be. Raha ny Digital Signage ihany no andoavanao ny fitaovana sy ny rindrambaiko! (mbola mila manana rindrambaiko tsara ianao! Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Easy Multi Display ianao dia mamporisika anao izahay hamaky ireto lahatsoratra roa ireto.
"Fa maninona no Easy Multi Display no rindrambaiko fanaovana sonia nomerika tsara indrindra?"
"Inona avy ireo fiasan'ny Easy Multi Display?).
Momba ny efijery, ny Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (andrim-panjakana frantsay iray natsangana tamin'ny 1989 mba hahafahana mifehy ny medias any Frantsa) dia manombana fa ny isan'ny efijery ao amin'ny ankohonana frantsay dia 5,5 eo ho eo, isa izay mitombo isan-taona. Mahagaga, sa tsy izany?
Saingy ny isan'ny efijery dia tsy hoe mitombo ao an-trano ihany fa amin'ny orinasa amin'ny habe rehetra. Azoko antoka fa rehefa miantsena miaraka amin'ny zanakao ianao, ny vadinao na ny vadinao dia efa nahita efijery dokam-barotra ianao. Ireo efijery ireo, manasongadina fampiroboroboana matetika. Tena ara-dalàna izany, mihena ny vidin'ny pikantsary. Afaka mahita efijery mora vidy ianao izao. Raha mila fampahalalana bebe kokoa ianao dia aza misalasala mamaky ity lahatsoratra tena mahaliana avy amin'ny Cnet ity "Tena mora vidy noho ny hatramin'izay ve ny fahitalavitra?".
Miankina amin'ny zavatra tianao hatao ny vidin'ny solosaina fa 150 € sy 1000 € eo ny elanelam-bidiny. Easy Multi Display dia misy amin'ny 149 € (tsy misy fisoratana anarana) sy ny efijery eo anelanelan'ny 100 € sy 800 €. Farany, ny elanelam-bidin'ilay vahaolana feno dia 400 € ka hatramin'ny 3000 € indray mandeha monja!
Ao amin'ny Easy Multi Display, fantatray fa ny raharaham-barotra tsirairay dia miavaka, samy hafa ary manana ny tantarany manokana. Ka inona ny antony itadiavana orinasa hafa rehefa afaka manana ny maha-izy anao ianao?
Te hametraka efijery ao amin'ny magazinao ianao hampiroboroboana vokatra? Misafidiana rafitra anatiny. Tianao ny misarika ny sain'ny olona manantena ivelan'ny fivarotana anao? Maninona raha mifidy rafitra ivelany? Misalasala eo amin'izy roa ianao? Safidio avy eo ny rafitra semi-outdoor! Maninona raha miaraka mifidy ireo safidy telo ireo?
Tsy anjaranao intsony ny mampifanaraka ny rafitra fampirantiana dizitaly fa ny rafitra fampirantiana dizitaly no tokony hifanaraka aminao!
Demokrasia koa no natao tao an-trano, ary vokatr'izany dia nipoaka ny isan'ny rindrambaiko eny an-tsena! Tena ara-dalàna izany satria tamin'ny taona 2019 dia efa nanisa mpamorona 19 tapitrisa manerantany, araka ny filazan'ny tranonkala frantsay silikon.fr, ity isa ity dia tokony hahatratra ireo mpamorona 40 tapitrisa amin'ny 2030. Noho izany dia afaka misafidy ny rindrambaiko tadiavinao araka ny filanao ianao!
Na izany aza, raha afaka manolotra rindrambaiko fanaovana sonia nomerika anao izahay, dia hanoro anao ny anay Fisehoan-javatra mora foana rindrambaiko, nahoana? Tsotra satria noforoninay izy ary fantatray fa ity rindrambaiko ity dia iray amin'ireo matanjaka indrindra, feno ary koa iray amin'ireo mora vidy indrindra eny an-tsena.
Ao anatin'ny tontolo tsy miovaova izay ahafahan'ny mpanjifa sy ny hetahetany miova mandritra ny alina, dia tena sarotra ny manaraka ny daty mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Vokatr'izany dia mpivarotra maro no ao aoriany ary mety hisy fiatraikany amin'ny varotra ataony izany satria tsy mifanaraka amin'ny doka-dohany.
Amin'ny Digital Signage, azonao atao ny mamolavola ny fampielezankevitra ara-barotra anao mandritra ny ora vitsivitsy, na minitra vitsy aza! Ny hany ilainao dia ny efijery, solosaina ary rindrambaiko toy ny Easy Multi Display, raha manana ireto zavatra telo ireto ianao dia efa manana ny fitaovana haseho.
Ankehitriny, mila atiny ianao, eto no tena haingam-pandeha, azonao atao ny maka sary ny vokatrao, ny horonan-tsary na manamboatra sary moto miaraka amina rindrambaiko toy ny Photoshop na Gimp. Matetika izahay dia mampiasa Canva.com, izay ahafahantsika mamorona votoaty haingana sy mora ho an'ny mpanjifantsika! Noho ity tranokala ity dia azonao atao ny mampifanaraka haingana ny doka amin'ny ora andavanandro, amin'ny mpanjifanao sy ny fanirianao.
Fampirantiana lamaody sy nomerika
Manana ekipa mpamorona sary miasa ho anao ve ianao? Manana namana mpanao hosodoko, mpamoaka horonantsary, mpanoratra ianao? Azonao atao ny mametraka ny asan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fampisehoana ny sangan'izy ireo amin'ny efijeryo, hankasitraka anao izy ireo ary hametraka ireo mpanakanto ao amin'ny faritra misy anao!
Amin'ny Easy Multi Display, azonao atao ny mampiseho sary, horonan-tsary, lahatsoratra ary maro hafa amin'ny tsindry vitsivitsy.
Misaotra ny Digital Display, afaka mahasarika ny masom-panahinao amin'ny fomba tsotra ianao amin'izay ary manana tombony mihoatra ny mpifaninana aminao! Maninona no asehoy dokambarotra eo amin'ny fivarotanao rehefa afaka mampiseho ny vokatrao amin'ny alàlan'ny horonan-tsary ianao? Azonao antoka fa hahasarika ny masonao ny vinavinanao!
Ho fanampin'ny fisarihana ny maso dia hampisehoanao mivantana ny vokatrao ary hampahafantarinao ny mpanjifa ny mety hitranga, koa raha mahaliana ny mpanjifanao ny vokatrao dia hirona kokoa hividy azy izy!
Fa maninona ny vokatrao no apetrakao? Azonao atao ny mametraka ny rafitra famantarana nomerika anao hanampiana ireo mpandeha an-tongotra! Ahoana no hanampiana azy ireo? Asehoy ny fantsom-baovao iray mivantana eo amin'ny fivarotanao mba hampahafantarana ny mpandeha an-tany ny vaovao androany. Azonao atao koa ny mampiseho ny vinavinan'ny toetrandro, ny sarintanin'ny tanàna, ny fandaharam-pitan'ny bus ...